ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि खुसीको खबर, प्रचण्डले गरे यस्तो घोषणा — Sanchar Kendra
१तिब्र गतिमा फैलिदै कोरोना, बाँकेमा दुई घण्टामा ५ संक्रमितको मृत्यु
२प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै ओलीले गरे मन्त्रीमण्डल बिस्तार, काे-काे बने नयाँ मन्त्री ? नामलिस्टसहित
३प्रधानमन्त्री ओलीले लिए पद तथा गोपनियताको शपथ
४ओली क्याबिनेटका क-कसलाई खुवाइदैछ सपथ ?
५गण्डकीमा कोरोना संक्रमणको डरलाग्दो अवस्था, ९४ जनाको मृत्यु
६माधव नेपालले किन बोलाए बैठक ?
७ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्नै लाग्दा माधव नेपालले बोलाए आफूपक्षीय नेताहरुको बैठक
८ओली पुन: प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि प्रचण्डले के भने ?
९कोरोना नियन्त्रणमा विश्वभर चर्चामा रहेकाे भुटानी मोडल
१०जङ्गलमा यस्तो काण्ड मच्चाइरहेका बेला अचानक प्रहरी पुगेपछि भयो दोहोरो भि’डन्त
११विवाहको सात महिनापछि नेहा रोहनप्रितबीच हातपात, भाइरल बनेको भिडियोसहित
१२ओलीलाई प्रचण्डले फोन गरेर भने- यो के तमासा गर्नुभएको ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरेका छन् ।
तत्कालिन एमाले र माओवादीले चुनावमा वृद्धहरुका लागि भत्ता बढाउने चुनावी घोषणा गरे पनि भत्ता नबढाइएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरु सरकारसँग रुष्ट बनेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ज्येष्ठ नागरिकका लागि भत्ता बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।
चुनावमा जाँदा वृद्धवृद्धाको भत्ता बृद्धि गर्ने भनेपनि वृद्धभत्ता नदिँदा ‘बुढाबुढी’हरु रिसाएको सोमवार मोरङको विराटनगरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रचण्डले बताए । प्रचण्डले चालू आर्थिक वर्षमै पनि बृद्धभत्ता बढाउने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले जनतालाई ठूला–ठूला योजना र रणनीतिक महत्वका योजनाको विषयमा बिस्तारै बुझाउँदै लगेपनि अहिलेका लागि सडकका खाल्डाखुल्टी पुर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताए ।
‘प्रधानमन्त्री र मेरोबीचमा कुरा भएको छ । सडकका खाल्डा खुल्टी अब छिट्टै पुरिँदै छन्,’ प्रचण्डले भने, ‘सडकका खाल्डाखुल्टी पुरिएपछि कांग्रेसको विरोध गर्ने बाटो पनि बन्द हुन्छ । त्यसपछि कांग्रेसले के भन्दो रहेछ हेरौंला ।’
पार्टी एकताको विषय छिटोभन्दा छिटो टुंग्याइने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो । आफूले प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग छलफल भएको प्रचण्डले बताए ।